T-SHIT ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများအတွက် China Transfer paper Aotian
T- SHIT FOR လွှဲပြောင်းစက္ကူ
ပုံစံChina pape, usa စက္ကူနှင့်ဂျာမန်စက္ကူနှင့်နိုင်ငံအသီးသီးမှစက္ကူပြီးဆုံးသောအခါကွဲပြားခြားနားသော texture ရှိသည်။ အမေရိကမှစက္ကူအရည်အသွေးသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
DARK တီရှပ်စာရွက်အတွက် -
၁။ ကုန်ပစ္စည်းအမည် - မှောင်မိုက်မှင်ဂျက်ပုံနှိပ်ခြင်းအတွက်အပူလွှဲပြောင်းစာရွက်
၂။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များ - A4 (210mm X 297mm)
ပရင်တာများအတွက်သင့်တော်သည် - ပရင်တာများအတွက်သင့်တော်သည်။ EPSON Canon HP၊ သေးငယ်သည့်စားပွဲတင်ကွန်ပျူတာ၊ ရေအခြေခံသောပုံနှိပ်စက်များအတွက်သင့်လျော်သည်။ သို့မဟုတ်ဆေးသုတ်သည့်တံဆိပ်တစ်ခု (crayons, oil brush, မီးမောင်းထိုးပြခြင်း, ရောင်စုံခဲတံများ ... ) ပုံဆွဲခြင်း
3. သက်ဆိုင်သောမှင်: ရေ -based ဆိုးဆေးများနှင့်ခြယ်ပစ္စည်း
၄။ ပုံနှိပ်ခြင်းစနစ် - ပရင်တာကိုဓာတ်ပုံ (P)၊ ပုံနှိပ်ထားသောစက္ကူရွေးစရာ ၆ (စက္ကူရိုးရှင်း) အနေဖြင့်သတ်မှတ်သည်။ အပူဖိအား - အပူချိန် ၁၆၅ ဒီဂရီသံ - ချည်ဖိုင် - ၂၅ ကီလိုဂရမ်ဖိအားထက်နည်းပြီး ၁ မိနစ်လျှင်မြန်စွာပူနေသည်။ ရေနွေးငွေ့မဖွင့်နိုင်
6. ဖိအား: အလတ်စားဖိအား
(၈) ပူပြင်းသည့်ထုတ်ကုန်များ - အလင်းရောင်၊ မှောင်မိုက်သောအရောင်များ (အနက်ရောင်၊ အပြာ၊ အနီနှင့်စသည်တို့) မည်သည့်ချည်မျှင်ကဲ့သို့သောချည်မျှင်သို့မဟုတ်ဝါဂွမ်းစသည့်ရောနှောထားသောအထည်များ၊ ဝါဂွမ်းပတ္တူနှင့်အခြားအိမ်အလှဆင်ပစ္စည်းများ
9. ထုပ်ပိုးသတ်မှတ်ချက်: 20 အပိုင်းပိုင်းသို့မဟုတ် 50 ကိုအပိုင်းပိုင်း
၁၀။ ပူပြင်းသည့်ပုံနှိပ်ခြင်းအတွက်မှတ်စုများ - မှောင်မိုက်သောစက္ကူအပိုင်းအစ ၅ ခုကိုရေနံစက္ကူ (အထီးကျန်စက္ကူ) ဖြင့်ပေးပို့ပြီးပုံနှိပ်ထားသည့်ပုံစံကိုပူပြင်းသည့်အထည်ပေါ်ပျံ့နှံ့စေမည်။ ထို့နောက်စက္ကူနှင့်အဖြူရောင်ဝါဂွမ်းအထည်တစ်ချောင်းဖြင့်ဆီ - စက္ကူပေါ်ရှိပုံစံကိုပိုမိုတောက်ပအောင်ပြုလုပ်ပါ။ ကောင်းသောအရောင်လျှော့ချခြင်းသည်အဖြူရောင်ပုံစံတွင်ပေါ်မည်မဟုတ်ပါ။
မှောင်မိုက်သော inkjet ထုတ်ကုန်:
1. ကျောထောက်နောက်ခံစာရွက်၏နောက်ကျော: အမှတ်အသားမပြု, ကြားနေထုပ်ပိုး
၄။ ရိုးရှင်းသောလုပ်ငန်းစဉ်၊ ပန်းကန်ထုတ်လုပ်ရန်မလိုအပ်၊ တိုက်ရိုက်ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်ထုတ်ခြင်း၊ တိုတောင်းသောလုပ်ငန်းစဉ်၊
၇။ ကောင်းမွန်သောအဝတ်လျှော်မှု (အဝတ်လျှော်စက်တွင်အသုံးပြုနိုင်သည်၊ အဝတ်လျှော်မှုခံနိုင်ရည်အဆ ၈၀ ကျော်ရှိသည်)
၈။ မည်သည့် brush သို့မဟုတ် printer နှင့်မဆိုတိုက်ရိုက်ဆွဲနိုင်သည်
၁၀။ အလွှာကိုလက်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ plotter ဖြတ်တောက်ပါ။ ကြံစည်သူသည်အလွှာကို ဖြတ်၍ အဖြူရောင်အစွန်းများ (စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို) ဖယ်ရှား။ ပုံစံကိုဖယ်ရှားပါ။ ထည်နှင့်မျက်နှာပြင်ပူနေသည့်ပုံစံကိုဖယ်ရှားပါ
1.Product အမည်: အလင်း Inkjet လွှဲပြောင်းစက္ကူ (အခွံပူ)
2. အရွယ်အစား: A4 (210mm X 297mm)
၃။ ပရင်တာများ - ဖယောင်းပွိုင့်များ၊ ရေနံ pastels များ၊ မီးချောင်းများ၊ EPSON, Canon HP နှင့် KONICA MINOLTA, OKI စသည့်လေဆာပရင်တာများကဲ့သို့ deskjet ပရင်တာများ။
4.Ink option: ဆိုးဆေးမှင်， ခြယ်ပစ္စည်းမှင်
၅။ အရည်အသွေးရွေးချယ်စရာ - ဓါတ်ပုံ - ကြေးမုံပုံ， စက္ကူရွေးစရာများ - ရိုးရိုးစာရွက်များ
6.Hat အပူစာနယ်ဇင်းအပူချိန်: အပူစာနယ်ဇင်းစက် 185 ° C / 365 ° F ကို။ ငွေလွှဲစာရွက်ကိုဖြစ်နိုင်သမျှဖိအားများများသုံးပြီးသယ်ဆောင်ပါ။ ရေနွေးငွေ့ function ကိုမသုံးပါနဲ့။
7. အပူပေးသည့်အချိန် - ၁၅ စက္ကန့်
အပူကိုနှိပ်ပြီးနောက် (3Seonds အတွင်း) 8.Hot Peel
9. ဖိအား： အလယ်အလတ် / မြင့်မားသောဖိအား
10. အဝတ်အထည်： ဤထုတ်ကုန်သည်အဖြူသို့မဟုတ်အဝါဝါချည်မျှင်အထည်များပေါ်တွင်ပုံနှိပ်ရန်သာသင့်တော်သည်
11.Packing： 20 စာရွက်များသို့မဟုတ် 50sheets
အပူပေးခြင်းသိကောင်းစရာများ on သံမဏိပြားပြားများတပ်ဆင်ရန်သင့်တော်သောတည်ငြိမ်။ အပူခံနိုင်သည့်မျက်နှာပြင်ကိုပြင်ဆင်ပါ။
InkJet အပူလွှဲပြောင်းစက္ကူ deskjet ပရင်တာနှင့်လေဆာပရင်တာသည်
1. ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်နှင့်ပိုပြီး elastic
4. နောက်ကျောစက္ကူကို ၃ စက္ကန့်အတွင်းအလွယ်တကူဖယ်ရှားနိုင်သည်။ ပုံမှန်အိမ်သုံးသံသို့မဟုတ်အပူဖိစက် သုံး၍ သုံးနိုင်သည်။
5. ကောင်းမွန်သောရေချိုးနိုင်ခြင်း (အဝတ်လျှော်စက်ထဲ၌အ ၀ီ၈၀ ထက် ပို၍ ဆေးကြောခြင်း။ )
၇။ သင်သည် cutline အားဖြတ်တောက်ခြင်းကို sissor များသို့မဟုတ်ဖြတ်တောက်သောဖျာဖြင့်ဖြတ်နိုင်သည်။
ရှေ့သို့ CUPT များအတွက် Subrimation စက္ကူ
နောက်တစ်ခု: CRYSTAL ဓာတ်ပုံစက္ကူ
တီရှပ်စက္ကူ, ရှပ်အင်္ကျီအဘို့သံစက္ကူ, Transparent Transfer Paper, ဓာတ်ပုံများအတွက်စက္ကူပုံနှိပ်, အနက်ရောင်ဓာတ်ပုံစက္ကူ, Glossy Photo Sticker Paper,